ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (သန်လျင်တံတား အမှတ် – ၃)၏ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ ဂုံးကျော်တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ – Yangon Hluttaw
Home / ပွနျကွားရေး / ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (သန်လျင်တံတား အမှတ် – ၃)၏ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ ဂုံးကျော်တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (သန်လျင်တံတား အမှတ် – ၃)၏ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ ဂုံးကျော်တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပ
Ygn Editor February 13, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး Leaveacomment 78 Views
ပဲခူးမြစ်ကူးတံတား (သန်လျင်တံတား အမှတ် – ၃)၏ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်း၏ ဂုံးကျော်တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ၁၃.၂.၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင် သာကေတမြို့နယ်၊ ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းရှိ စီမံကိန်းဧရိယာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ထွန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်လင်း၊ လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးလင်းနိုင်မြင့်၊ MLIT ၊ Vice Minister H.E.Mr.Michio KIKUCHI ၊ Embassy of Japan Ambassador H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ Chief Representative JICA Myanmar Office Mr.Masayuki KARASAWA ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ၊ လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ပဲခူးမွဈကူးတံတား (သနျလငျြတံတား အမှတျ – ၃)၏ တညျဆောကျရေးစီမံကိနျး၏ ဂုံးကြျောတံတား ပန်နကျတျောတငျ မင်ျဂလာအခမျးအနားကို ၁၃.၂.၂၀၁၉ ရကျနေ့ နံနကျ(၀၉း၀၀)နာရီအခြိနျတှငျ သာကတေမွို့နယျ၊ ရှုခငျးသာမွို့ပတျလမျးရှိ စီမံကိနျးဧရိယာ၌ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါသညျ။
အဆိုပါ အခမျးအနားသို့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျ ဦးဖွိုးမငျးသိနျး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောဥက်ကဋ်ဌဦးတငျမောငျထှနျး၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဒုတိယဝနျကွီး ဦးကြျောလငျး၊ လှတျတျော ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဦးလငျးနိုငျမွငျ့၊ MLIT ၊ Vice Minister H.E.Mr.Michio KIKUCHI ၊ Embassy of Japan Ambassador H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA ၊ Chief Representative JICA Myanmar Office Mr.Masayuki KARASAWA ၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ဝနျကွီးမြား၊ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြား၊ ဖိတျကွားထားသညျ့ ဧညျ့သညျတျောမြား၊ လှတျတျောရုံးအကွီးအမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျခဲ့ကွပါသညျ။
Previous ကွမ်းခြံကုန်းနယ်ရှိ ဥပဒေရုံးသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အနောက်ဘက်တွင် တည်ရှိနေပါသောကြောင့် ဥပဒေရုံးပြောင်းရွှေ့ရေး ဆောက်လုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်မရှိပါက အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို မေးမြန်း
Next ကော့မှူးမြို့နယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပါတီဝင်များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ လာရောက်လေ့လာ